Weydii su'aal • Violence que faire ?
Waa maxay rabshadu?
Awood ku dhibaateyn dhaqaalaha
Awood ku dhibaateynta dagga galmada
Awood ku dhibaategnta jireedka ah
Waxaad u soo haajirtay Switzerland
Rabshadaha ka dhex dhaca lamaanaha…
Home > Weydii su’aal
Ma tahay dhibane ama dembiilaha rabshada, mise ma taqaan qof agtaada ah oo leh rabshad qoys? Keligaa ha la joogin dhibaatadaada.
Waxaad ku nooshahay xaalad adag oo xanuun badan. Waxaad dareemeysaa cidlo iyo cidlo la’aan. Su’aal ma qabtaa, miyaad seegtay macluumaadka, mise waxaad rabtaa inaad sheegto waxa aad ku sugan tahay? Xirfadlayaasha khibradda leh ayaa ku dhegaysan doona oo kaaga jawaabi doona boggan.
Website-kaviolquefaire.ch wuxuu ku yaalaa Switzerland. Kaliya isticmaalayaasha intarneedka ee degan Switzerland ayaa heli kara jawaab shaqsiyeed.
Si aad u hesho ciwaanno faa’iido leh gudaha Faransiiska, waxaad la xiriiri kartaa “Association Solidarité Femmes” (Ururka Wadajirka Haweenka), INAVEM ama lambarka bilaashka ah 3919. Kuwa rabshadaha sameeya, FNACAV waxay diyaar u tahay inay ku caawiso.
Shabakadda Yurub ee WAVE ayaa sidoo kale diyaar u ah inay kaa caawiso sidii aad u heli lahayd macluumaadka xiriirka ururada kugu dhow kuwaas oo ku siin kara caawimaad la taaban karo xaaladdaada haddii aad rabto.
Onviolquefaire.ch, waxaad si qarsoodi ah u waydiin kartaa dhammaan su’aalaha adiga khuseeya dadka ku takhasusay caawinta dhibanayaasha iyo dembiilayaasha rabshadaha qoyska. Khibraddoodu waxay u oggolaanaysaa inay fahmaan kakanaanta xaaladdaada oo ay ku taageeraan. Waxaad heli doontaa talo lagugula taliyay, oo ku habboon xaaladdaada gaarka ah.
Xaaladaadu waxay helaysaa dareenka ugu badan
Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in xaaladdaadu aanay aad u xunayn, oo ay tahay inaad meel uga tagto kuwa “runtii u baahan”. Ogow in xaaladaadu ay muhiim u tahay sida dadka kale. Goobtan waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa ay saameeyeen rabshadaha, waxaan haysanaa waqti aan kuugu hurno adiga.
Waxaad tahay soo galooti ku sugan Switzerland, waxaanad qabtaa su’aal sharci
Waxaad tahay soo galooti Swiss ah, waxaad la nooshahay lamaanahaaga rabshad, waxaadna jeclaan lahayd talo sharci? Xor baad u tahay inaad nala soo xidhiidho.
- Gobolka Bern
Xarunta mudaharaadka bulshada (CSP) – info@csp-beju.ch
- Gobolka Fribourg:
CCSI / SOS – info@ccsi-fr.ch
Caritas – info@caritas-fr.ch
- Gobolka Geneva:
Xarunta mudaharaadka bulshada (CSP) – info@csp-ge.ch
- Gobolka Jura:
Xarunta mudaharaadka bulshada (CSP) – consultation@csp-beju.ch
- Gobolka Neuchâtel:
Caritas – caritas.neuchatel@ne.ch
- Gobolka Valais:
Xarunta Suisse – Immigrés – csivs@bluewin.ch
- Gobolka Vaud:
Mudaharaadka bulshada ee Fraternité du Center (CSP) – frat@csp-vd.ch
Sida su’aal loo weydiiyo
Si aad su’aal u weydiiso, kaliya iska diwaangeli boggayaga adigoo isticmaalaya magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah. Adeeggu waa bilaash. Haddii aadan weli marin, waxaad iska diiwaan gelin kartaa Espace Perso (goobta gaarka ah) ee hoose. Waa mid aad u fudud oo aad u degdeg badan. Kadib waxaad waydiin kartaa su’aashaada waxaanu kuugu jawaabi doonaa wakhtiga ugu fiican. Caadi ahaan, wakhtiga jawaabtayadu waa saddex maalmood oo shaqo, si kastaba ha ahaatee, su’aalaha ku saabsan luqadaha aan Faransiiska ahayn, waxay qaadan kartaa wax yar ka dheer. Si aad u aragto jawaabtayada, waxaad u baahan tahay inaad gasho akoonkaaga adigoo isticmaalaya magacaaga isticmaale kadibna dhagsii “Mon compte” (My Account).
Waxaad ku weydiin kartaa su’aal luqadahan
- Deutsch – Jarmal
- Ingiriisi – Ingiriis
- اللغة العربية- Carabi
- Español – Isbaanish
- Italiano – Talyaani
- Polski – Polish
- Portugués – Boortaqiis
- Bosanski-hrvatski-srpski – Boosniiyaan / Croatian / Serbian
- Soomaali – Somali
- தமிழ் – Tamil
- Turkce – Turki